Antsipiriham-Baovao Tafaporitsaka Momba Ny Drafitra Rosiana Hametraka “Aterinetom-Pirenena” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2015 5:11 GMT
Mba ho toy inona no ho endrik'izany Aterineto Rosiana mizaka tena izany? Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Tato anatin'ny taona vitsy, betsaka ny hetsika nataon'ny governemanta Rosiana mba hananana fifehezana bebe kokoa ny aterineto, tamin'ny fanamafisana ireo fepetra fanarahana maso ny votoaty ety anaty serasera sy ny fanosehana ireo orinasa vahiny mandraharaha momba ny aterineto miasa ao anatin'ny RuNet, toy ny Apple sy Google, mankany amin'ny fametrahana angon-drakitra ao an-toerana.
Avoitran'ny poritsaka iray vaovao avy amin'ilay andianà mpijirika mifono misitery “Anonymous International” (fantatra koa amin'ny hoe Shaltai Boltai na Humpty Dumpty) fa mandray sosokevitra izao ny governemanta Rosiana hanaovana hetsika henjankenjana kokoa hanokana-monina ny aterineto Rosiana. Tafiditra ho iray amin'ireny ny fotokevitra “sehatra fampitambaovao nasionaly,” izay mety hanome tolotra aterineto natokana fotsiny ho ampiasain'ny Rosiana.
Ahitàna mailaka marobe ao anatin'ilay antontan-taratasy tafaporitsaka, avy amin'i Dmitry Panyukov (talen'ny Ivontoerana Fanisam-bahoaka, Fifindramonina, ary Fampandrosoana isam-paritra) sy Garald Bandurin (talen'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovaon'ny RusHydro), miaraka aminà antontan-taratasy iray tamin'ny 22 Jona 2015 mamaritra ny tolokevitra iray “sehatra fampitambaovao nasionaly,” izay hanafoana ny fiankinan-dohan'i Rosia amin'ireo orinasa sy ny teknolojia Tandrefana. Ity antontan-taratasy manokana ity dia toa i Bandurin sy Sergey Ganzya avy amin'ny Bankin'ny Varotra Ivelany no niaraka namolavola azy, ankoatra ireo olona marobe hafa. Ireo fehezantany fanokafàna ao amin'ity antontan-taratasy ity dia manipika ireo antony hamokarana aterineto Rosiana mitokana:
Ho amin'ny tombontsoan'ny olom-pirenen'ny Federasiona Rosiana, ny rafi-panjakana Rosiana, ary ny firoboroboan'ny toekarena, ireo orinasa sy fotodrafitrasa tena ain-dehibe, dia natolotra ny hananganana sehatra fampitambaovao nasionaly. Natao ny famoronana sehatra tahaka izany ho fampiroboroboana ny fametrahana fototra mahaleotena ho an'ny teknolojian'ny fampitam-baovao ho an'ny firoboroboana sosialy sy toekaren'ny firenena.
Tsy vaovao akory ny hevitra hoe afaka misintaka amin'ny aterineto erantany sy mamorona habaka virtoaly mahaleotena ho azy manokana i Rosia : efa narangarangany tany aloha izany, tao anatin'ireo fanehoankevitra sarotra takarina (“Tetikasa CIA” no niantsoan'i Putin ny aterineto ) na tany anatin'ny antson'ireo Rosiana mpanao lalàna hiomanana amin'ny fanapahana faobe ny tontolon'ny cyber. Ao anatin'ilay antontan-taratasy dia manondro ireo loza manokana mitatao amin'ny filaminam-pirenena ateraky ny fiankinan-dohan'i Rosia amin'ny teknolojia vahiny ireo mpanoratra. Faritan'ireo mpanoratra ao fiantraikan'ny fianteheran'i Rosia amin'ireo orinasa toy ny Microsoft, Apple, sy Google, izay nahafahana nanetsika ireo rantsana politika tamin'ny hetsik'i Rosia tany Okraina tamin'ny hetsika teknolojikan'ny firenena.
Ohatra akaiky indrindra ananantsika ny nibahanan'ny Apple sy Google ireo Krimeana mpampiasa azy ireo. Raha ny hevitr'i Natalya Kasperskaya, talen'ny Infowatch ilay orinasa Rosiana sangany amin'ny sehatry ny Teknolojiam-pifandraisana, avoavo ihany ny mety fisian'ny “fanapaingorana” manokana ao anatin'ny “Windows”, ilay be mpampiasa indrindra hatreto, izay afaka tonga dia mibahana amin'ny alàlan'ny fibaikoana izany avy any ivelany ny ankamaroan'ireo solosaina sy tambajotra Rosiana.
Ho an'ireo nanoratra ilay fotokevitra “sehatra fampitambaovao nasionaly”, mihoatra lavitra noho ny fitsinjatsinjahan'ireo orinasa tandrefana mpamokatra manokana ny teknolojia ny filàna aterineto Rosiana mahaleotena—resaka fillaminam-pirenena izy ity, hoy ny finoan-dry zareo. Trangan-javatra iray mety hitranga no avoakan'ireo mpanoratra, tranga izay mety “hanangolen'ny” Tandrefana an'i Rosia noho ilay lazaina fa fiankinandohany ara-teknolojika.
…, ao anatin'ny tranga isian'ny fitomboan'ny fifandirana amin'ny Tandrefana, tsy misy ankehitriny antoka tsy mitongilana izany, hoe tsy ho vitan'ny sampan-draharahan-dry zareo misahana ny fiarovana ny tsy hanangoly, ary ny ratsy indrindra dia ny haka ny fifehezana mivantana ireo fotodrafitrasa saropady—tafidtra amin'izany ny toeram-pifinenan'ny fiarandalamby, ny vavarano sy ny paompin'ireo fantsona goavana, raha tsy hitanisa ireo fotodrafitrasan'ny fifandraisandavitra. Rehefa dinihana, aminà sehatra Tandrefana daholo izany rehetra izany no miasa.
Fanampin'ny fampifanarahana azy amin'ireo sazy nataon'ny Tandrefana amin'ny fahafahana teknolojika ananan'i Rosia, mety hanome ny tosika fanairana ilain'ny sehatry ny Teknolojia sy ny Fampitambaovao ao Rosia ilay drafitra, mitovy be amin'ny sazy ara-tsakafo nataon'i Rosia tamin'ny Tandrefana nikendrena mibaribary mba hanamafy ny sehatry ny fambolena tao Rosia nantsoina hanolo ny fanafàrana avy any ivelany.
Ny Aprily 2015, natolotry ny Minisitra Rosiana Misahana ny Fifandrasandavitra ho an'ny Praiminisitra Dmitry Medvedev ny drafira nataony hanoloana ny fanafàrana ho an'ireo indostrian'ny Teknolojia sy ny Fifandraisandavitra, tamin'ny fanosohana hevitra fa hatramin'ny 2025, tokony hilatsaka any amin'ny 50 isanjato ny tahan'ireo rindrankajy vahiny tsy manana solony vitan'ny Rosiana.
Na izany aza anefa, eken'ireo mpanoratra fa ny vatomisakana voalohany tsy maintsy dinganina mba hampitomboana ny fahaizamanao Rosiana amin'ny sehatra Teknolojia sy Fifandraisandavitra dia ny fahavononan'ny sain'ny tanora hanosika/hampisy fientanana teknolojika ao Rosia. Miaraka amin'ny fametrahana ny “sehatra fampitambaovao nasionaly”, inoan-dry zareo fa mety hitsimbadika ny “fandosiran'ny atidoha” manampahaizana, ireo Rosiana manana fahaizamanao sy matianina amin'ny Teknolojia sy Fifandraisandavitra.
Ny famoizana sy ny “fandosiran'ny atidoha” tena mamiratra sy ireo fanahy Rosiana tsara indrindra angamba no tena fanamby amin'izao fotoana izao. Raha tsy manana olona mivoatra, mahay ary afaka mifaninana mifandraika amin'ny tinady erantany rahampitso, dia voaozona hiankindoha i Rosia ary ho mpanaraka fa tsy ho mpitarika.
Raha toa ka tsy lazain'ny poritsaka avy amin'ny Anonymous International mazava tsara hoe ambaratonga ambony hatraiza tao amin'ny Kremlin no tongan'ilay tolokevitra, ary toy inona fahamatorana'ny fomba nandraisana azy, dia mbola manome topimaso mampiharihary ny olana teknolojikan'ireo sangany ao Rosia kosa izy. Tsy ahitàna resaka momba ny olana ideolojika na maoralin'ny Roskomnadzor (ilay toy ny alikan'ny Kremlin miambina ny aterineto) any anatin'ireo mailaka sy antontan-taratasy tafaporitsaka ireo, saingy maneho olana goavana mikasika ny halemena teknolojikan'i Rosia raha toa ka miharatsy hatrany hatrany ny fifandraisany amin'ny Tandrefana. Satria tohizan'i Rosia hatrany ny famoretana ny fahalalahan'ny aterineto, ny lalao farany, araka izay nasongadina ao anatin'ity tolokevitra tafaporitsaka ity, dia mety hahatonga ny Rosiana mpampiasa aterineto ho tonga amin-javatra tsy mifanalavitra amin'ilay mànda avon'ny tranonkala ao Shina, fa tsy ny Aterineto Tiorka fatra-pifantina sy faran'izay voasivana indrindra.